तपाईंको शरीरको उचाई अनुसार तपाईंको तौल कति हुनु पर्दछ ? - Mitho Khabar
June 25, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on तपाईंको शरीरको उचाई अनुसार तपाईंको तौल कति हुनु पर्दछ ?
मानिसको तौल कति हुनुपर्छ ? यसको जवाफ उक्त व्यक्तिको उचाई र शारीरिक बनौटलाई आधार मानेर दिन सकिन्छ । शरीरको तौल बढी हुनु र कम हुनु दुबै रोगको संकेत हो । त्यसैले आफ्नो तौलबारे जानकार हुनुपर्छ । यसका लागि सहि तरिका हो, बिएमआई अर्थात बडी मास इन्डेक्स । यो मोटोपन जाँच्ने सर्वमान्य मानक हो ।
सामन्य भन्दा बढी तौल हुनु भनेको शरीरमा रोगको संभावना बढ्नु पनि हो । त्यसैले सकेसम्म तौललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । असामन्य माटोपनले मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत हृदय रोगको खतरा बढाउँछ । कम तौल हुनु पनि राम्रो होइन सदैब स्वास्थ हुनको लागि आफ्नो शरीरको तौलमा ध्यान दिनु पर्दछ